Ry Tanora Liam-Pandrosoana Nitsangam-bolo Tamin’ny Fandresen’i Trump… · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2016 12:10 GMT
Misy ireo milaza zavatra ao amin'ny haino aman-jery sosialy .
Ary misy ireo sorena amin'ireo izay milaza zavatra.
Avy eo misy ny tezitra amin'ireo sorena.
Ary mbola misy ny toerana ho an'ny rehetra.
Raha toa ianao ka demokraty, sosialy demokraty, tia fandrosoana, liberaly vaovao, avy amin'ny hery ankavia, na tahaka ilay iantsoinay azy eto Però hoe ” caviar leftis“, dia tsy ankasitrahanao izao ho lazaiko aminao izao. Na eo aza izany fampitandremana izany, kanefa safidinao ny mbola hamaky ihany, ekena, izany no dingana voalohany hanatriaranao ny kitapo nifonosanao. Ary tsara izany.
Tato anatin'ny andro vitsivitsy, novakiako tanaty haino aman-jery samihafa ny momba ny hoavin'izao tontolo izao, amin'izao fifidianana any an-tany lavitra izao, izay mifamatotra amin'ny hoavintsika ny azy. Fifidianana izay verin'ilay mpifaninana nohasoasoavin'ireo haino aman-jery sy ireo mpamaky azy, fa azon'ilay mpifaninana devoly tonga nofo. Marina, fantatro fa tsy tonga lafatra io mpifaninana io—tena fanahiana goavana ho ahy ny tsy finoany ny fiovaovan'ny toetrandro— fa nandresy izy. Tamin'ny ara-dalàna, ary mahalala izany isika rehetra. Rehefa tsy ekenao izany, angamba fotoana izao handinihanao ny hevitra fototry ny demokrasia.
Angamba hilaza amiko ianao fa tsy tonga lafatra ny rafi-pifidianana any amin'io firenena resahana io, ary te-hanova izany ireo olona sasany. Tsara izany— noho izany dia ataovy ny ady ho amin'io fanovàna io, nefa ataovy ao an-tsaina fa tsy notsikerainao io rafim-pifidianana io raha nandresy ny mpifaninana nankasitrahanao. Heveriko amin'ny fo tsy miangatra fa tokony hodinihinao ny fiheveranao ny atao hoe demokrasia. Ary satria efa eo ihany ny resatsika, dia tsaratsara kokoa aminao ihany koa angamba ny mandinika ny hevitry ny fifandimbiasana ara-politika. Nahoana ? Satria ve zava-doza raha manana zo hanana izay governemanta tiany eo amin'ny fitondrana ny antsasaky ny firenena ? Tsia? Satria reko ny tabataba sy ny rediredinao momba ny ” fitsinjarana ny fitondrana”, ary tsy tiako hisy hiampanga anao ho mijery ny sombin-kazo eny amin'ny mason'ny hafa fa tsy mahita ny andry eo amin'ny anao.
Hetsi-panoherana nataon'ireo tsy tia an'i Trump tany New York City tamin'ny Aprily 2016. SARY: mal3k (CC BY 2.0)
Raha nojerenao ny bitsika izay nandraisako ity lahatsoratra ity ho lohahevitra dia mety efa napetrakao sahady ho ao anatin'ny vondrona faharoa aho, iray amin'ireo vondron'olona sorena amin'ny hafa noho ny zavatra nolazainy. Tsy marina izany— angamba be tebiteby aho fa tsy sorena, raha ny fijeriko dia mamorona vaovao tsy marina ny fanambaranao ny momba ny fiavian'ny farany . Avia, ianao izay toa olona matotra, izay raha tsaroako tsara, mahafantatra ny fanaovany gazety sy ny siansa politika, noho izany fantatrao ny tiako ho lazaina. Tsy tokony hikodinkodina milalao ny tabletinao ianao, sady maminany ny fiavian'ny Mpitaingin-tsoavaly Efatra , satria misy ny atao hoe faminaniana tanteraka noho ny finoan'ny olona ary sahala amin'ny iray amin'ireny izao. Tsy izaho ihany no milaza izany, fa misy hafa ihany koa :
Lasa hery ho an'i Trump ny fanaovana tsinontsinona mandrakariva azy nataon”ireo saranga afovoany tao amin'ny haino aman-jery sosialy hatramin'ny nanombohan'ny fampielezankevitra. Ilay fanambonian-tena tsy misy ilàna azy voalaza amin'ny vazivazy sy ireo sangisangy tsindrom-paingotra ihany no nanosika ny fivelaran'ny heriny…. Tamin'ny fanaovana fanentanana miendrika vazivazy sy kisarin-teny nataon-dry zareo ho fanohanana an'i Hillary ary ny fampielezana izany tsy ankiato tamin'ny haino aman-jery sosialy, dia nitskotsko velively izay zavatra soloin'io lehilahy tsy misy ilàna azy io tena eo anatrehan'ny mpifidy azy ry zareo.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha mbola tsy azonao ihany, dia ny tsy fahafantaranao ireo mpiara-mifidy aminao no nitondra anao ho amin'izao toerana misy anao androany izao. Mazava ho azy fa tahaka izany, na ratsy kokoa noho izany aza, no hahazo izay nanao iny fanentanana tsy nahomby iny. Betsaka no azo lazaina, fa ny fandresena no zava-dehibe farany, fa tsy ny faharesena. Ary resy ianao. Eny, fantatro fa nitety izao tontolo izao ianao, niady ho an'ireo tsy misy mpiahy any an-tany lavitra any, nahafeno ny fepetra. Fa angamba tsy tena fantatrao tsara ny tontolo akaiky anao. Angamba ianao, tahaka ny nahazo ahy indray mandeha, namela ny tenanao ho jambenan'ny jiron'ny tanàn-dehibe ka tsy nahomby sady lasa jamban-javatra hafa, ireo zavatra miafina eny antsefatsefan-dàlana eny, miafina any amin'ny zorony maizina izay tsy tongan'ny hazavàna.
Ary tsy ianao irery ihany : tsy nahomby ihany koa ny haino aman-jerinao, tsy nahita ny zava-nisy ihany koa ry zareo. Noho ny faharesen-dahatra na ny tombontsoa, dia mitanila ny fandikàny ny zava-misy, tsy feno, feno hadisoana. Ohatra, vakio ity :
Nisy marina ve ilay “dona” nankalazaina be tamin'ny haino aman-jerin'ny antsasak'izao tontolo izao omaly ? Angamba, angamba fotsiny ihany, ny antsasaky ny vahoaka Amerikana fotsiny no voakasik'ilay “dona”, satria ny antsasany iray hafa nifidy, nahalala, ary angamba tamin-kafaliana be…. Ny asa fanaovana gazety, nisy fotoana nilona tao anatin'ny fiarahamonina, dia nihataka hatrany hatrany tsy hisy fifandraisana amin'ireo vondrom-piarahamonina izay nanaovany tatitra. Izany dia satria ny antsasak'ilay vondom-piarahamonina ihany no omeny tatitra. Ny antsasany iray hafa dia tsy raharahiany fotsiny izao.
Ilaina ny mandinika ny antony nahatonga izany, indrindra rehefa zavatra natao tamin-kitsim-po. Amim-panajana tanteraka, heveriko fa misy idiran'ny resaka saranga izany. Araka ny voalazan’ ity mpaneho hevitra ity :
Ny antony lehibe tsy ahafantaran'ireo haino aman-jerim-pirenena ny resaka saranga dia satria tsy ampy fahasamihafàna ara-sosialy sy toekarena ny laharan-dry zareo. Vitsy amin'ny olona teraka tao anatin'ny tsy fananana no miasa any amin'ny trano famoaham-baovao na fanontàna boky.
Nefa aza mbola kivy amin'izany. Amin'ny farany ho hitanareo fa tsy ananan'io heverinareo ho Antikristy io ny fahefana hanokatra ny vavahadin'ny helo. Satria tsaroanao ny fifandanjam-pahefana ? ny vato mizàna sy ny tsindrin'entana ? Hitohy ny fiainana, tahaka ny ambaran’ity lahatsoratra mahatsikaiky ity :
Kely, na tsy misy mihitsy aza ny vintana hahafahan'i Donald Trump hamotika ny zo sy ny fahafahana amin'ny ankapobeny. Ankoatra, mazava loatra, ireo fiovàna endrika vitsivitsy tsy misy dikany… Mbola ho tafavoaka velona amin'i Donald Trump ihany i Etazonia ary amin'ny faran'ny fe-potoana fiasàny dia mbola hisitraka ny fihenan'ny tahan'ny tsy an'asa hanakaiky ny aotra ny firenena, karama ambony isan'olona, ambony lavitra noho ny an'i Espaina, sady hifehy ny kolontsainy, ny toekarena, ny tafika ary ny mpahay siansa manerana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, dia ny andry efatra izay mampijoro ireo fanjakàna.
Fara-faharatsiny—ary izany no fampiononana ny adala — tsy noheveriko fa vendrana tahaka ireo liam-pandrosoana eto amin'ny fireneko ianao. Ireo liam-pandrosoana izay atahorako fa tsy hanaiky mihitsy ny hifanaraka amin'ny filoha voafidy, izay mpikambana amin'ny hery faran'ny havanana, hanafoana ny Fiarahamiasa Iraisan'i Pasifika manontolo sy ireo fifanarahana hafa efa nolaviny hatry ny ela. Hisaotra azy noho ny amin'izany ve ry zareo ?
Eny ary, zavatra hafahafa ny politika, saingy raiso ho toy ny tranga hianaranao mijery zavatra tsy miaraka amina tampimason'ny foto-pisainana sy ny fakàn-tahaka be fahatany. Anjaranao indray izao no manitsa-tay, hoy ny fiteny. Fa ho hitanao fa, tahaka ny loto tsara rehetra dia handonaka ny sainareo sy hanokatra azy ho any amin'ny tontolo tena izy izany. Mirary anareo hahita ny tsara aho.
Navoaka voalohany tamin'ny Globalizado ity lahatsoratra ity .